Wednesday May 31, 2017 - 19:20:44 in Wararka by Super Admin
Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah xoogag hubeysan ayaa markale magaalada Muqdisho ku khaarijiyay sarkaal sare oo katirsanaa wasaaradda G/dhigga dowladda Federaalka Soomaaliya ee shisheeyaha soo duulay la shaqeysa.
Caawa Maqribkii ayay Rag hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab waxay degmada Wadajir ee galbeedka Muqdisho ku dileen G/lle Sare Cabdullaahi Cilmi Nuur oo (Cabdullaahi Radio) ku magac dheeraa kaasi oo katirsanaa waaxda caafimaadka Melleteriga DF-ka.
Mid kamida dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in rag bastoolado ku hubeysan ay Sarkaalka ku toogteen xaafadda Siligga kadibna si nabad gelya ah ayay goobta uga dhaqaaqeen.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa durbadiiba lasoo degdegtay sheegashada mas’uuliyadda dilka sarkaalkan sida ay baahisay idaacadda Andalus.
G/lle Sare Cabdullaahi Cilmi Nuur ayaa kamid ahaa saraakiisha firfircoon ee Melleteriga DF-ka wuxuuna si toos ah u hoostagayay wasaaradda G/dhigga, dilalka lagu ugaarsanayo askarta iyo saraakiisha Dowladda Federaalka ayaa kusii xoogeysanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho tan iyo markii Farmaajo Noqday Hoggaamiyaha DF-ka.